Chelsea, Man Utd iyo PSG oo ku dagaalamaya saxiixa bar-tilmaameedkii hore ee kooxda Arsenal – Gool FM
Chelsea, Man Utd iyo PSG oo ku dagaalamaya saxiixa bar-tilmaameedkii hore ee kooxda Arsenal
(Yurub) 30 Jan 2020. War saxaafadeed ka soo baxa gudaha wadanka Ingiriiska ayaa lagu xaqiijiyay maanta oo khamiis ah, in kooxda kubadda cagta Chelsea ay safka hore kaga jirto loolanka loogu jiro saxiixa xiddiga naadiga Ajax ee Hakim Ziyech.
Xiddiga u dhashay wadanka Morocco iyo kooxda Ajex ee Hakim Ziyech ayaa wuxuu bar-tilmameed buuxa u noqday qaar ka mid ah kooxaha waaweyn ee horyaalka Premier League, kuwaasoo doonaya inay ku guuleystaan ​​saxiixiisa suuqa xagaaga ee soo aadan.
Sida laga soo xigtay wargeyska “The Sun” ee dalka England macalinka kooxda kubadda cagta Chelsea ee Frank Lampard ayaa wuxuu bar-tilmaameed buuxa ka dhiganayaa saxiixyada xiddigaha Ben Chilwell iyo Hakim Ziyech suuqa xagaaga ee dhamaadka xilli ciyaareedka furmi doono.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Ziyech marka uu cusbooneysiiyay qandaraaskiisa kooxda Ajex xilli ciyaareedkan, in meesha laga saaray lacagta lagu burburin karo heshiiskiisa oo lagu qiyaasay 25 milyan oo ginni, laakiin weli wuu ka bixi karaa horyaalka wadanka Holland.
Wargeyska “The Sun” ee wadanka England ayaa wuxuu sidoo kale shaaca ka qaaday in qiimaha Hakim Ziyech ee suuqa kala iibsiga xilligan la joogo lagu qiyaasayo uu yahay 42.5 milyan oo gini.
Dhinaca kale “The Sun” ayaa wuxuu daaha ka rogay in Chelsea ay loolan adag kala kulmi doonto kooxaha Manchester United iyo Paris Saint-Germain si loo go’aamiyo heshiiska Ziyech suuqa xagaaga ee soo aadan.
Waxaa xusid mudan in Hakim Ziyech uu ahaa mid ka mid ah bar-tilmaameedyada kooxda kubadda cagta ee Arsenal xagaagii hore, laakiin Gunners ayaa waxay ka doorbiday inay la soo wareegto xiddiga garabka kaga ciyaara haatan reer Ivory Coast ee Nicolas Pépé.
“Waxaa na sugaya kulanka adag ee Madrid Derby, waxaana dooneynaa in xilli ciyaareedkan aan ku guuleysanno saddex koob” – Zidane